108X60 ဒေါင်လိုက်စီးရီး Range ပါးပျဉ်း ၆၀ စင်တီမီတာခေတ်မှီသောဒေါင်လိုက်ပုံစံမီးဖိုချောင်သုံးပါးသည်အိမ်ထောင်စုများတွင် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။. ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းများ၏လွယ်ကူသောဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, အထူးကိရိယာမရှိဘဲ. ၎င်းတွင်အလွန်တောက်ပသောစွမ်းအင်ချွေတာနိုင်သော LED မီးနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်. လေအမြင့် 850 m³ / h သည်အနံ့နှင့်အနံ့များကိုဖယ်ရှားသည်။ …
102E60-T T-shape အကြမ်းခံသံမဏိအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 60cm ဒီ T-shape စတိုင်အကွာအဝေးပါးပျဉ်းလှပသောသံမဏိ finish ကိုရှိပါတယ်. ကမ်းလှမ်းသည်3အမြန်နှုန်းနှင့်အစွမ်းထက်ထုတ်ယူမှုနှုန်း750m³အထိ. အနုပညာအပိုင်းအစတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းမလိုချင်တဲ့ဆေးလိပ်သောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့, အပူ, နှင့်အမဲဆီ ...
106X-A Split ရုပ်သိမ်းခြင်းအကွာအဝေးမြင့်မားသောထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းနိမ့်သောဆူညံသံအကွာအဝေးအကွာအဝေးသည်သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်ချက်ပြုတ်သောအငွေ့နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။. ဤမီးဖိုချောင်သုံးမျက်နှာဖုံးသည်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းရှိရမည်. သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ကိုတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်, အကောင်းဆုံးတီထွင်ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းယူဆောင်လာသည်။
108X60A ဒေါင်လိုက်စီးရီး Range ပါးပျဉ်း 60cm
108X60A ဒေါင်လိုက်စီးရီး Range Hood 60cm လက်ဗွေဆန့်သည့်ပုံဆွဲပုံစံကိုကြည့်ပါ, စူပါ - ကျယ်ပြန့်ဘက်ပေါင်းစုံလေကြောင်းဝင်ပေါက်. ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်အဆင့်မြင့်ပြီးစတိုင်ကျသည်, အရာအမျိုးမျိုးသောမီးဖိုချောင်ကိုက်ညီ. အမူအယာထိန်းချုပ်မှုဖြင့်ထိတွေ့ထားသော panel သည်သင့်အားအဆက်အသွယ်မပါဘဲပါးပျဉ်းကိုလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်စေသည်. အလိုအလျောက် ၄၅ ဒီဂရီဖွင့်ပိတ်နှင့်အတူလေအောက်ပိုင်းဝင်ပေါက်
102E90-T T-shape အကြမ်းခံသံမဏိအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 90cm ဒီ T-shape ကိုကြော့သံမဏိ finish ကိုရှိပါတယ်. ၁၁၀၀ မီလီမီတာရှိသောစွမ်းအင်စီးဆင်းမှုသည်မီးခိုးထွက်ရန်လုံလောက်သည်, ဖုန်, နှင့်အခိုးအငွေ့. 3-မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုသည်သင့်အားအနိမ့်ရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်, အလယ်အလတ်, နှင့်မြင့်မားသောစုတ်ယူခြင်းပါဝါ. 2*1.5W မီးခွက်များ, 270ကြေးနီဝါယာကြိုးအပြည့်ဖြင့်…